တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီ 2013 ၏ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီအကြားခြားနားချက်များကိုအောက်ပါနေကြသည်:
•ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကုမ္ပဏီများသည် non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီများမှလုပျဆောငျရမညျအဖြစ်၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာစကားလုံး "လီမိတက်" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် ", Ltd" ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
တစ်ဦးကေမန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံရပ်ခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုင်ပြီးအဘို့ဖြစ်၏။ ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေ, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, အမွေဆက်ခံသို့မဟုတ်ဥစ္စာဓနအခွန်မဒေသဆိုင်ရာအခွန်ရှိပါသည်။ သျောလညျး, သငျသညျသငျသညျနေထိုင်သူတစ်ဦးသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းတိုင်းပြည်အရာများ၏အခွန်ဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောကုမ္ပဏီ (ထို Cayman အတွက်) ဒေသခံဝန်ထမ်းငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဒေသခံများနှင့်အတူစာချုပ်များကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
• 100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: နိုင်ငံခြားသားများအပေါငျးတို့သရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: သာပေါငျးတို့သရှယ်ယာများအတွက်မရတဲ့ငွေပမာဏကိုတစ်ဦးရှယ်ယာရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များအများပြည်သူကိုမရရှိနိုင်ကြသည်။ ဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာခွင့်ပြုထားပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများကုမ္ပဏီအပေါ်အခွန်နှင့်ရှယ်ယာရှင်များမဆိုအမျိုးအစားကောက်ခံကြပါဘူး။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေထိုင်သူများရုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကိုအခြားနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများကဲ့သို့ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးအတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမတောင်းဆိုနေတဲ့အစည်းအဝေးများ: ရှယ်ယာရှင်များသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာများအစည်းအဝေးများကျင်းပရန်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်: အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တဲ့စာရင်းကိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မျှမတို့သည်လိုအပ်သောစာရင်းစစ်ရှိပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးအဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်ကျွန်းများအတွက်အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုဆင်တူမဟုတ်သည်အတိုင်း, ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်နာမည်တစ်ခုကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။ သူတို့ကပင်ဘာသာပြန်ချက်ပေးရန်မလိုဘဲအင်္ဂလိပ်များနှင့်အခြားဘာသာစကားတစ်ခု dual-name ကိုရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပြုထားသောအမည်များကိုသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေများအတွက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကန့်သတ်အချိန်များအတွက် reserved နိုင်ပါသည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများသည်များမှာပေမယ့် "လီမိတက်" သို့မဟုတ် ", Ltd" သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါ။
သူတို့က "ဘဏ်", "စင်းလုံးငှား" နှင့် "တော်ဝင်မိသားစု" အပါအဝင်ကန့်သတ်ထားပါသည်အဖြစ်အချို့သောစကားလုံးများကိုကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် အသုံးပြု. မရပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကွဲပြားခြားနားသော features တွေနှင့်အတူကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများမူကွဲများအတွက်ထောက်ပံ့:
ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီ - ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားနိုင်ငံသားများသို့မဟုတ်နေထိုင်သူများနှင့်အတူကေမန်ကျွန်းများအတွင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။ သို့သော်သူတို့တစ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးအင်တာနက်ရရှိရန်, ရေ, လျှပ်စစ်မီး, နှင့်အခြားလိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများကျုံ့နိုင်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ဖြစ်လာရန်တစ်ဦးလျှောက်ထားခြင်းမရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်းအတွင်းပိုင်းကောက်ယူပါလိမ့်မည်တဲ့ကြေငြာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
အသားအရောင်ခွဲခြား Portfolio ကုမ္ပဏီ (SPC) - တစ်ခုကကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီကိုတစ်ဦးအသားအရောင်ခွဲခြားအစုစုကုမ္ပဏီဖြစ်လာလျှောက်ထားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SPC တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏လွတ်လပ်သောတွင်လည်းသို့၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှင့် liabilities ခွဲခြားနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေပိုင်ဆိုင်မှုနိုင်ပါတယ်။
လီမိတက် Duration: ကုမ္ပဏီကင်းလွတ်ခွင့် - အလိုအလျောက်ပျော်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစား 30 နှစ်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးရန်၎င်း၏သက်တမ်းကန့်သတ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း (စာရင်းပေးသွင်းထားသူတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးဝေစု၏နိမ့်ဆုံး) စာရင်းသွင်းထားပါသည်မည်မျှရှယ်ယာနှင့်အတူ•ကနဦး subscriber များအား '' အမည်များ;
•မည်သည့်ငွေကြေးကိုအတွက် Authorized ရှယ်ယာမြို့တော်။
•သူတို့က, လွှဲပြောင်းရှေးနုတျ, ဒါမှမဟုတ်ရွေးနှုတ်တော်မူကြသည်ကိုဘယ်လိုရှယ်ယာထုတ်ပေးရေး, အမျိုးအစားများ,
•ရှယ်ယာရှင်များမှာ '' အစည်းအဝေးများ;
•ရှယ်ယာရှင်များမှာ '' မဲပေးခွင့်,
•သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်, အစည်းအဝေးများ, လျော်ကြေးများနှင့် indemnification နှင့်အတူအရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း,
• Dividends ငွေပေးချေမှု; နှင့်
တိုင်းကုမ္ပဏီအဘယ်သူ၏တည်နေရာမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းခြင်းနှင့်အများပြည်သူအသိပေးစာအားဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးရှိရမည်။ ဒါရိုက်တာက၎င်း၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်ကြောင့်တရားဝင် resolution ကိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ တည်နေရာ resolution ဖြင့်အပြောင်းအလဲကို၏တစ်ဦးကလက်မှတ်မိတ္တူကူးမြောက်ခံရဆုံးဖြတ်ချက်၏ 30 ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်များ (ရှယ်ယာရှင်များ) ၏တစ်ဦးက Registry ကိုလိုအပ်ပါသည်ပေမယ့်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာစောင့်စေခြင်းမရှိပါ။ မဟုတ်သလိုအဖွဲ့ဝင်များ၏ Registry ကိုအစိုးရကသို့မဟုတ်အများပြည်သူအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရန်ရှိသည်ပါဘူး။ ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလို့ငှာအဆိုပါအခွန်ပြန်ကြားရေးအာဏာပိုင်ဥပဒေအရထုတ်ပေးသောအခါတစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
• Negotiable အသို့မဟုတ် Non-ညှိနှိုင်း;
• (အခွင့်အရေးနှင့် liabilities ၏သက်ဆိုင်ရာအပိုငျးနှင့်အတူ) ရှယ်ယာပိုငျးအတွက်ထုတ်ပေး;
•, ရွှေ့ဆိုင်းပိုမိုနှစ်သက်သို့မဟုတ်အခြားအထူးအခွင့်အရေးများနှင့်အတူထုတ်ပေး; နှင့်
• (ကုမ္ပဏီကေမန်ကိုမှန်ကန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သည့်အခါ မှလွဲ. ) Bearer အစုရှယ်ယာ။
ဝေမျှမယ်လက်မှတ်များပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရှယ်ယာလက်မှတ်များမရှိဘဲထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောရှယ်ယာကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများဒါပေးလျှင် Dividends ထွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ ဒါရိုက်တာနေထိုင်သူများဖြစ်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်စေနိုင်သည်။ အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာကနဦးညွှန်ကြားရေးမှူး (s) ကိုစာရင်းပြုစုပြီးကတည်းကဒါရိုက်တာများမဆိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ရေးအသင်း၏ဆောင်းပါးများနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။
ဒါရိုက်တာ၏ liabilities အစည်းအရုံး၏ဆောင်းပါးများသည်နှင့်အညီကန့်သတ်ထားသို့မဟုတ်န့်အသတ်နိုင်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်း၏အရာရှိများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများအတွက်ဒါရိုက်တာများနှင့်အရာရှိများအားလုံးကိုတန်ခိုး, တာဝန်များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုကသမ္မတ, ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်အတွင်းရေးမှူးကဲ့သို့နေ့စဉ်ရေးရာစီမံခန့်ခွဲရန်အရာရှိများခန့်အပ်ရန် option ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များနှင့်လိပ်စာများကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာသိမ်းဆည်းထားဒါရိုက်တာ & အရာရှိတစ်ဦး Registry မှာထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးချိန်း၏ 60 ရက်အတွင်း, အ Registry ကိုတစ်ဦးမိတ္တူကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူလိုအပ်ချက်များကိုဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အရာရှိများ၏မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
အစိုးရအစာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းအင်းများအတွက်တိကျသောစံချိန်စံညွှန်းမလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်ရှိသမျှသောကုမ္ပဏီဝင်ငွေ, ကုန်ကျစရိတ်, ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် liabilities ဖေါ်ပြခြင်းလုံလောက်သောစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းများပုကေမန်ကျွန်းစုများတွင်ထားရန်မလိုပါနေစဉ်အစိုးရနှင့်၎င်း၏အခွန်အာဏာပိုင်များအသိပေးစာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖို့အမိန့်ပေးစေခြင်းငှါဖြစ်လျှင်, သူတို့ရရှိနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
အနိမ့် Authorized Capital ကို
မလိုအပ်နေချိန်မှာဒီကုမ္ပဏီနိမ့်ဆုံးအစိုးရမှတ်ပုံတင်ကြေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်အများဆုံးမြို့တော်ကြောင့်အများဆုံးကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့်ကုမ္ပဏီများ $ 50,000 CI တစ်ခုအခွင့်အာဏာမြို့တော်ကိုရွေးချယ်ပါ။
တိုင်းဇန်နဝါရီလတစ်ခုချင်းစီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, စီးပွားရေးမှမဆိုအပြောင်းအလဲများကျွန်းပြင်ပကောက်ယူခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမကုန်သွယ်မှုကျွန်းအတွင်းပိုင်းကောက်ယူခဲ့သည်ရှိမရှိကြေညာအတူပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးနောက်နှစ်များအတွက်ဒီဇင်ဘာလ 31 အားဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြေးအာဏာပိုင်များဝေစုမြို့တော်ငွေပမာဏအပေါ်မှာအခြေခံတဲ့လျှောစကေးဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သူမျှမအခွန်အခများရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဝင်ငွေအခွန်မျှကော်ပိုရိတ်အခွန်မျှမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်မျှဆုကြေးဇူးကိုအခွန်, အမွေမခံရအခွန်မျှမစည်းစိမ်ကိုအခွန်, ဒါမှမဟုတ်သီးသန့်ကျွန်းပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချနေတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်အခြားမည်သည့်အခွန်။
သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းအခြားသူများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ကြလိမ့်မည်ကဲ့သို့သော IRS ကိုအားလုံးဝင်ငွေထုတ်ဖေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်နှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးများ (ရှယ်ယာရှင်များ) ကိုကိုင်ထားရန်မလိုအပျခရှိပါသည်။
ဒါဟာတစ်ဦးကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဘို့လုပ်ငန်းစဉ်3စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်4ထံမှယူနိုင်သည်ကိုခန့်မှန်းထားသည်။
100% သာ. ကြီးမြတ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုမရှိအခွန်ငွေ, privacy ကို, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာမရှိစာရင်းစစ်မျှလိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးများနှင့်အင်္ဂလိပ်၎င်းတို့၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကကေမန်ကျွန်းများကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိကြသည်။